Charles Bernstein – zlkontempo
To Charles Bernstein
Posted on February 2, 2021 | by zlkontempo | LeaveaComment on To Charles Bernstein
Lives will surely be lost, es
pecially the valued and valu
able ones’ history returns as
his story’s hysteria wisteria’s
woe-begone wonders of mili
-tary mighteous myths the shit
will go on as the gold of the gul
lible the value of the valueless
the justissed of the injusticed
The I of the many I I I s will not
be vanquished into many me
me me s WE may be killed and
the killing will not stop even if
the killers kiss their killed no
retribution no getting nowhere
to nought inamatrix of murder
ous mushrooming mounts I de
clare I in the form of the many
do die in deathless death as they
live in the death of life to reveal the
future hidden in the futile lives of tr
uth you frame the world as through
a world of righteousness as you live
in the wrold of wright and we go like
a flapped mirror floating on the moors
Posted in Poetry | Tagged Charles Bernstein, English, Poetry
Posted on July 19, 2013 | by zlkontempo | 1 Comment on ဘန်းစတီးန် စာကိုး
9/11 ပြီး ချားလ်စ်ဘန်းစတီးန်ရဲ့ တုန့်ပြန်မှု
Posted on July 11, 2013 | by zlkontempo | LeaveaComment on 9/11 ပြီး ချားလ်စ်ဘန်းစတီးန်ရဲ့ တုန့်ပြန်မှု
အောက်ပါစာသားဟာ 9/11 နျူးယောက်တိုက်ခိုက်မှုအပြီးနောက်တစ်နေ့မှာ ချားလ်စ်ဘန်းစတီးန် POETICS archives မှာ တင်လိုက်တဲ့ post ဖြစ်ပါတယ်။ ဘာသာပြန်ခြင်းကလွဲလို့ ကျွန်တော့်စာလုံး တစ်လုံးမှမပါပါ။ (ဇေယျာလင်း)
Date: Wed, 12 Sep 2001 23:02:03 – 0400
Reply – To: UB Poetics discussion group
<POETICS @ LISTSERV. ACSU. BUFFALO. EDU>
Sender: UB poetics discussion group
Subject: ယနေ့ဟာ သင့်လက်ကျန်သက်တမ်းတစ်လျှောက်လုံးရဲ့ နောက်တစ်နေ့ပဲ
ရုတ်တရက်ပဲ ကျွန်တော်တို့တိုက်ခန်းထဲ ပလပ်စတစ်လောင်နေတဲ့ အနံ့ဆိုးကြီးလှိမ့်ဝင်လာတယ် ၊ ကျွန်တော်တို့ မျက်လုံးတွေစပ်လာ တယ်။ အဆောက်အဦထဲက တစ်ခုခုလောင်နေတာလား။ ဘေးအခန်းက လူကပြောတယ် ၊ အဲဒါမြို့လယ်က လာနေတဲ့အနံ့တဲ့။
မေ – မေ ဘာဆင်န်ဘရူဂါဖုံးဆက်တယ် ၊ သူမအဆင်ပြေပါတယ်တဲ့၊ တိုက်ခိုက်မှုဖြစ်ပွားရာရဲ့ နှစ်ဘလောက်အကွာမှာ ဆက်လက်ရှိနေ ပါတယ်တဲ့။ သူမကို ကျွန်တော်ပြောတယ် ၊ ဘာတွေဖြစ်နေတယ်လို့ ကျွန်တော်စိတ်ကူးကြည့်လို့ မရဘူး။ သူမကပြန်ပြောတယ်။ စိတ်ကူး ကြည့်ဖို့ လွယ်ပါတယ် ၊ ရုပ်ရှင်တွေထဲကလိုပေါ့ ၊ ဒါပေမယ့် တကယ်ခက်တာက ဘယ်လိုမှ နားမလည်နိုင်မှုပဲ။
Posted in Articles | Tagged 9/11, Charles Bernstein, Translation